Casuumadaha Muhiimka ah ee Sebtember ee Apple miyuu soo gaari doonaa Warbaahinta Toddobaadkan? | Waxaan ka imid mac
Ogosto ayaa dhammaanaya dhammaan warbaahinta iyo baloogyada ku takhasusay wararka la xiriira tufaaxa qaniinay ayaa sugaya maalinta Apple u soo dirto casumaadaha Muhiimadda ayaa la filayaa bisha Sebtember. Martiqaadyada waxaa badanaa la soo diraa wax ka badan hal toddobaad kahor taas ayaana ah waxa nagu kalifaya inaan daabacno maqaalkan. Toddobaadkan ma Apple ayaa dooran doonta inay u dirto casumaadaha?
Haddii Apple ay rabto in Keynote uu ahaado toddobaadka Sebtember 12, waxay ku dhowdahay in kooxda suuqgeynteeda ay u soo diraan casumaadaha xafladda si kuwa raacsan iyo saxaafadda kuwa tegaya ay u maareeyaan safarradooda.
Apple waxay qabanaysaa Keynote bisha Sebtember. Dad badan ayaa ah wararka xanta ah ee helaya Keynote ee la filayo usbuuca ugu horeeya ee Sebtember, in kasta oo ay sabab u tahay munaasabadaha Sony ee PlayStation -ka cusub waxay dib u dhigi lahaayeen usbuuca labaad ee Sebtember. Wax kasta oo ah go'aanka kama dambaysta ah ee Apple, waxay ku xiran tahay waxa dhacaya toddobaadkan waxaan ogaan doonaa haddii Keynote dhab ahaantii noqon doono toddobaadka koowaad ama labaad ee Sebtembar.
Apple sida caadiga ah waxay casuumaad u dirtaa munaasabadda wax ka badan hal toddobaad kahor, sidaa darteed haddii Keynote la qaban lahaa usbuuca ugu horreeya ee Sebtember, waxay noqon doontaa inta lagu jiro toddobaadkan in Apple sii deyn doonto casumaadaha. Waxaan aad u dhegaysan doonnaa si aad adigu ugu horreyso ama ugu horreyso aad u aragto casuumaadda cusub ee Apple ee dhacdada, sidaad ogtahay, wuxuu had iyo jeer na siiyaa tilmaamo leh naqshaddiisa waxa ay noo soo bandhigayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Martiqaadyada Muhiimka ah ee bisha Sebtember Apple miyey garaaci doontaa warbaahinta toddobaadkan?